Igumbi eli-1 lokulala elipholileyo elinendawo yokulala kwi-Apartment Solo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGus
Ikona entsha yokulala etofotofo kunye neyobutofotofo kwigumbi elinezixhobo (iphuli, indawo yokuzivocavoca, indawo yokupaka iimoto) kunye nembonakalo yepanoramic yeSolo. Kufutshane kakhulu neyona mall inkulu yeSolo (iPaki, i-7 mins drive) kunye neendawo zokutyela ezininzi ezizodwa. Yimizuzu esi-7 kuphela ukuya ePandawa Waterboom naseDr.Oen Hospital. Icocekile kwaye icocekile, indawo efanelekileyo yokuba uhlale kuyo zombini ixesha elifutshane okanye ixesha elide, ishishini okanye ukuzonwabisa. Konwabele ukuhlala kwakho!
Igumbi lokulala elinye lakho kwindawo yobuchule yeSolo Baru. Eli gumbi limi kumgangatho we-16, ligqitywe nge-air conditioning, izixhobo zokupheka, kunye neendawo ezifana ne-gym, i-pool, kunye neendawo zokupaka. Uya kuvuka kumbono omhle wesixeko kunye nokufudumala kweSurakarta.
Ubumelwane bulunge kakhulu kuye nabani na (abakhenkethi, abafundi, abahambi ngezoshishino) njengoko ikufuphi nodederhu lweevenkile, isibhedlele, kwaye ikufuphi nePandawa Waterboom eyenza kube mnandi ukuhlala.
Ngaba ujonge ukutya kwesintu? Zininzi ezi kufutshane nefulethi! Kubandakanya uNasi Liwet, Soto, Sate, nabanye abaninzi! Kukwakho neStarbucks, Burger king, KFC, kunye nezinye iivenkile zokutya zamazwe aphesheya. Ngaba uyafuna ukupheka nokuthenga iimpahla? Akhongxaki! Ungahamba uye kwivenkile ekufutshane yaseCarrefour kuphela imizuzu emi-5 yokuhamba.
Ingaba ungumfundi? Kukwakho ininzi ye-angkringan ekufutshane! Iivenkile ezininzi zekofu kunye neevenkile zokutya ezizodwa zasekuhlaleni.
Usapho okanye umhambi weshishini? Le ndawo iphambili yobuchule iya kukuthatha naphi na apho ufuna ukuya khona ngobonelelo oluninzi lweeteksi ezikwi-Intanethi!
Umbuki zindwendwe ngu- Gus
Siza kuphendula imiyalezo yakho kunye nemibuzo ngokukhawuleza ukuqinisekisa eyona meko ilungileyo yokuhlala kwakho